၀ င်းဒိုး ၁၀ မှာ Windows7မီနူးဘယ်လိုထားရမလဲ Androidsis
Francisco Ruiz | | အခြားကိရိယာများ, လဲ tutorial
တစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သင်ကြားပေးခဲ့သော Androidsis YouTube channel သို့ဗွီဒီယိုတစ်ခုတင်ခဲ့သည် ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်ရန် MAC သို့တက်ကြွသောထောင့်များကို enableကျွန်ုပ်သည်အလွန်တရာတောင်းခံသည့်လှိုင်းများကိုရရှိခဲ့ပြီး၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်လျှောက်ထားနိုင်သည့်လျှောက်လွှာကိုမျှဝေရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည် ငါ၏အ Windows7မှာ Windows 10 menu ကို.
တယ်လီဂရမ်၊ အီးမေးလ်နှင့်အခြားလူမှုရေးကွန်ယက်များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်ထံသို့လာသည့်တောင်းဆိုမှုများသည်များစွာသောသူများနှင့်များစွာသောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည် လိုအပ်သောလျှောက်လွှာသို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ခြင်း၏ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှင်းပြထားသောဗွီဒီယိုWindows 10 menu ကို Windows7နဲ့အများကြီးပြောင်းလဲနိုင်အောင်လုပ်ထားတဲ့အဓိကစတိုင်တွေကိုသူတို့ကိုသင်ပေးဖို့ပါ။
အစပြုရန်ပထမ ဦး ဆုံးအပလီကေးရှင်းကိုပြောပါ ၀ င်းဒိုး (၁၀) တွင်ဤ ၀ င်းဒိုးမီနူးကိုရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်မည့်ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်, Open Source ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဒါကလုံးဝအခမဲ့ပါ.
ရွေးချယ်ထားသည့်မီနူးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခု၊ သင်၏ Windows 10 ၏ start menu ကို၎င်းသည် run ရန်ကွန်ပျူတာအက်ကွဲရန်မလိုအပ်ပါသင်အပြည့်အဝသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးဖော်ထုတ်နိုင်သည့်တစ်ခုဖြင့်လုံးဝအစားထိုးပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အရသာအတွက် Windows 10 start menu သည်ကြောက်စရာကောင်းသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လိုအပ်သည်။
1 Classic Shell ဆိုတာကတော့ Windows 10 start menu ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲစေမှာပါ
2 ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြသမှုအားလုံးတွင်ပြသနိုင်သည့် Configuration options များ
2.1 Windows အတွက် Classic Shell ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
3 (ဗွီဒီယို) Windows ရှိ MAC သို့တက်ကြွသောထောင့်များမည်သို့ရှိသည်
Classic Shell ဆိုတာကတော့ Windows 10 start menu ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲစေမှာပါ
ဤဆောင်းပါး၏အစတွင်သင့်အားထားခဲ့သည့်ပူးတွဲဗီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်ပြောသောအပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်သည်သုံးစွဲသူများစွာသိပြီးသားအရာများဖြစ်သည်။ ဂန္ထဝင် Shell ကရွေးစရာစုံတွဲတစ်တွဲကိုသာနှိပ်ရုံဖြင့်၎င်း၏အခြေခံမုဒ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည် Windows 10 start menu ကို Windows 7, Windows XP, Classic, Windows Aero စတိုင်ကို Windows Vista သို့ပြောင်းပါ အများကြီးအများကြီးပို။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Shell သင်္ကေတအတွက် start ခလုတ်၏ပုံသဏ္changeာန်ကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည်။ စိတ်ကြိုက်ပုံရိပ်ကိုပင်စတင်ခလုတ်အဖြစ်ထားပါ.
ဒီအခြေခံမုဒ်မှ menu ၏စတိုင်ကို Windows XP၊ Windows7နှင့်အခြားရရှိနိုင်သည့်အခြားစတိုင်များသို့ပြောင်းလဲခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အရာအားလုံးကိုကော်လံတစ်ခု (သို့) ကော်လံနှစ်ခုဖြင့်ပြလိုလျှင်ရွေးချယ်ပါ နှင့်ပြသရန်သို့မဟုတ်ဝှက်ရန်ဒြပ်စင်များနှင့်သင် mouse ကိုနှိပ်သောအခါအဘယ်သို့ဖြစ်ပျက်ကိုပင်ရွေးချယ်ပါ။
စုစုပေါင်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ကွဲပြားသောအရေခွံ (၈) ခုရှိပြီး Windows 8 start button ကိုအလွယ်တကူညှိနိုင်သည်၀ င်းဒိုးသုံးစွဲသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းကိုက်စေသည့်ဆိုးဝါးလှသည့်ရောင်စုံသောအိုင်ကွန်များကိုချန်ထားရန်လုံးဝဖုံးကွယ်ထားသည်။
သင်၏ Windows 10 ၏ start menu ကိုအမြင့်ဆုံးအထိစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်လိုပြီးပြီဆိုလျှင် option ကိုနှိပ်ပါ။ ဆက်တင်များအားလုံးပြပါ, ယခုငါတို့အရသာအတွက်မထင်မှတ်လျှင်ငါတို့နှစ်သက်ရာကို configure ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သမျှကိုကြည့်ဖို့။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြသမှုအားလုံးတွင်ပြသနိုင်သည့် Configuration options များ
ဒီမျဉ်းတွေပေါ်မှာပဲထားခဲ့တာကိုမင်းတွေ့နိုင်တယ် Classic Shell application ကခွင့်ပြုထားတဲ့ configuration options ပမာဏ Windows 10 start menu ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း
အားလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးကဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနေတဲ့ configurations တွေကသူတို့ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီစောင့်ကြည့်နိုင်မှာပါ, ဒါကြောင့်သင်ဟာကွန်ပျူတာဗဟုသုတလိုအပ်စရာမလိုပဲအချိန်ယူရုံသာလိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ ၀ င်းဒိုး ၁၀ မှကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သောဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရန်သင့်အားအကြံပေးသည်၊ ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ Classic Shell လို့ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်ဟာအောက်ခြေလင့်ခ်ကနေကူးယူနိုင်တဲ့အသားအရေအမျိုးမျိုးကိုအသေးစိတ်ဖေါ်ပြပေးတယ်။
Windows အတွက် Classic Shell ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Classic Shell ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ
ဒီ post ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ငါမင်းကိုထားခဲ့ပါ ဗီဒီယိုကိုတက်ကြွသောထောင့်များ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို MAC သို့ဖွင့်ရန်ရှင်းပြသည် အကယ်၍ တက်ရောက်လာသူမည်သူမဆိုသင်၏ Windows 10 တွင် MAC နှင့် Linux ၏ဤလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ရန်စိတ်ဝင်စားသည်။
(ဗွီဒီယို) Windows ရှိ MAC သို့တက်ကြွသောထောင့်များမည်သို့ရှိသည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » အခြားကိရိယာများ » Windows7မှာ Windows 10 မီနူးကိုဘယ်လိုရမလည်း။